ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ပေ Sitter ရှာဖွေခြင်း
အားဖြင့် Therese Kopiwoda
တစ်ပေ Sitter ရှာဖွေခြင်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 18 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
သင်တို့သည်လည်းထွက်သွားသည်လာမည့်အချိန်, ဒါကြောင့်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အပျော်အပါးင်ရှိမရှိ, သင်တစ်ဦးငှားရမ်းစဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထိုင် သင့်အိမ်သို့လာရန်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစောင့်ရှောက်ဖို့. ကြေးစားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter ၏ဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ကိုင်နေသောသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်သက်သာနေထိုင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု, သူဘေးနှင့်နိုင်စွမ်းလက်၌င် သိ. သင်တို့စိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးသည်, အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများသို့မဟုတ်အပေါ်မှီခိုအားထားရန်မနေဘဲသင်လွှတ်မြောက်လာ. သင်သည်သင်၏ keys ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်နှင့် Rover နှင့် Fluffy သော်လည်းနှုတ်ဆက်ပြီးမှချီလွှဲခြင်းမပြုမီ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitters နှင့်သူတို့ပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးရန်အချိန်ယူ. အနည်းငယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitters အင်တာဗျူး, သူတို့ကိုနည်းနည်းသိရ, နှင့်မေးခွန်းများကိုမေးမြန်း. ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်. ထွက်ရှာမည်, သူတို့သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသွားရောက်ကြည့်ရှုလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမကြာခဏ, အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးလာရောက်လည်ပတ်သူနောက်ဆုံး, သူတို့သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူနေစဉ်အဘယ်သို့ပြုရပါလိမ့်မယ်, သူတို့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို, နှင့်အဖိုးအခများ. သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ယေဘုယျအချက်အလက်များအပြင်, သင်အနည်းငယ်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်များကိုဖုံးလွှမ်းစေလိုပါလိမ့်မယ်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း.
– အာမခံနှင့် / သို့မဟုတ် Bond: ဒီဖြစ်ပျက်မှယာဉ်မတော်တဆမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦး mishap ပေါ်ပေါက်သငျ့တကအချို့သောအတိုင်းအတာအထိသင်နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်. အများစုမှာတစ်ဦးတည်းသော proprietors အာမခံထားနေကြတယ်, နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitters employ အများစုန်ဆောင်မှုကပ်လျက်တည်ရှိခြင်းနှင့်အာမခံမထားခဲ့ကြသည်. အာမခံ၏အထောက်အထားတောင်းရန်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးဒါဟာင်.
– အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရေးပေါ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ: သင်သွားသောင့်တဲ့အခါသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နေမကောင်းဖြစ်လာလျှင်, သင်ရောက်မသွားနိုင်လျှင်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter ယူအားအဘယ်အတိုင်းအတာကိုသိသည်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မယ်. သူသို့မဟုတ်သူသည်သင်၏ vet ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်တွေရှိသင့်, နှင့်ကုသမှုအမျိုးအစားနှင့် / သို့မဟုတ်သင်နှင့် ဆက်သွယ်. မရနိုင်လျှင်သင်အပေါ်အခွင့်အာဏာရပမာဏသည်.
– အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter အရေးပေါ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို: သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter နေမကောင်းဖြစ်လာနှင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစောင့်ရှောက်ဖို့နိုင်ဘူးဆိုရင်သိမ်းယူခံရကြလတံ့သောအရာကိုတိုင်းတာကိုမေးပါ, သူသို့မဟုတ်သူမကြောင့်ရာသီဥတုဆိုးရွားသောအခြေအရန်သင့်အိမ်သို့ရနိုင်ခြင်းပါလျှင်, ဒါမှမဟုတ်သဘာဝဘေးဒဏ်၏အဖြစ်အပျက်.
– Key ကိုလုံခြုံရေး: key ကိုဖော်ထုတ်သိမ်းဆည်းပေးလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမေးပါ. သော့ချက်များပေါ်မှာသင့်ရဲ့အမည်သို့မဟုတ်လိပ်စာနှင့်အတူဘာမှမှပူးတွဲပါမဖြစ်သင့်, အခါမသုံး, အကောင်းဆုံးကတော့သူတို့သော့ခတ်ထားသည့်ဘေးကင်းလုံခြုံသို့မဟုတ်တခြားလုံခြုံတဲ့ကျုပ်အတွက်လုံခြုံပြီးဖြစ်ရမယ်. အများစုဟာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထိုင်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်းအနာဂတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထိုင်နေသောတာဝန်တွေအတွက်အသင့်ကီးထားရန်ပူဇော်ပါမည်.
– ကန်ထရိုက်စာချုပ်များနှင့်အခြားပုံစံများ: သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter ရက်စွဲများကဲ့သို့သောအမှုအရာတို့ကိုအသေးစိတ်ရေးသားထားသောစာချုပ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသေချာပါစေ, ကြိမ်, အပေါ်သို့သဘောတူညီခဲ့န်ဆောင်မှု, အရေးပေါ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို, အဓိကသော့ချက်လုံခြုံရေး, နှုန်းများ, စသည်တို့ကို.
– ကိုးကား: အနည်းငယ် client များအတွက်အမည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အဘို့အမေးပါ. ဤလူစကားပြောဖို့အချိန် ယူ. ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုအကြောင်းကိုမေးမြန်းကြပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်အထူးသဖြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter ငှားရမ်းင့်ဖြစ်စေမ. အများစုကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitters စထိုကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်ဆရာကဲ့သို့အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးပညာရှင်များထံမှကိုးကားပေးစေခြင်းငှါမင်္ဂလာ, groomers, သို့မဟုတ်သင်တန်းဆရာ.
– အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ: မည်သည့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများသင့်ရဲ့အလားအလာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter အကြောင်းကြား, အပြုအမူဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်. သို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောအကြောင်းအချက်များ. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လောက်သင်သည်တတ်နိုင်သလောက် information ကိုပေးလှူသူတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်သူမ၏ enable လုပ်လိမ့်မည်.
– မူလစာမျက်နှာကိစ္စများ: အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဝသကဲ့သို့, သင့်မရှိခြင်းပေါ်လာစေခြင်းငှါသင့်အိမ်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့် oddities သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter အကြောင်းကြားရန်သေချာစေပါ (ကကျော်သွားကအိမ်သာ, စနစ်တကျ lock မကတံခါးများ, လုံခြုံရေး Alarm, စတာတွေ).
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှုသောကြောင့်,, သင်နှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သင်သည်သင်၏အိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအဆင်ပြေရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကိုယ်ပိုင်ထိတို့ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေပါ, အကောင့်သို့သင့်ရဲ့အူခံစားမှုယူနေတာသေချာပါစေ, နှင့်သင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် sitter ရန်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏တုံ့ပြန်မှုစောင့်ရှောက်. ပြင်ဆင်မှုနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအနည်းငယ်နှင့်အတူ, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သင်ကွာပါတယ်နေစဉ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ပါလိမ့်မည်, နှင့်သင်ပြန်လာသောအခါစိတ်အားထက်သန်စွာမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်စုံမက်နှင့်အတူသင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ဖို့သာရှိလိမ့်မည်ဟု.